Olee otú undelete Videos on iPod aka
> Resource> iPod> Olee otú iji undelete iPod aka Videos
Enwere m ike undelete video si m iPod aka?
My enyi kasị mma, ọ bụ nke mbụ oge maka ya iji iPod aka, na mberede ehichapụ niile videos dekọrọ maka ya akwụkwọ. Ọ na-eji iTunes, nke mere na e nwere ndabere faịlụ. Ndị videos ndị mara mma dị ya mkpa na ọ jụrụ m maka enyemaka. Ọ bụghị na e nwere n'ezie a ụzọ undelete video si iPod aka?
Ọ bụrụ na gị ezigbo enyi adịghị nwere iTunes ndabere, nanị ụzọ na ọ nwere ike iji bụ undelete videos kpọmkwem site ya iPod aka. Ugbu a, Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery) na Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows) (iOS 9 akwado) bụ ụwa mbụ iPhone data mgbake ngwá ọrụ software. Ha na-na a pụrụ ịdabere na nwere ike obi. Ị nwere ike iji ha ka ha undelete video si iPod aka 4 n'ụzọ zuru okè, ma n'ihi na iPod aka 5, ị chọrọ onye iTunes ndabere faịlụ mbụ.
Download free ikpe version n'okpuru nwere a-agbalị. Ọ bụ nchebe iji Wondershare Dr.Fone na ọ ga-afụ ụfụ ngwaọrụ gị mgbe niile.
Undelete video on iPod aka na nzọụkwụ
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPod aka na kọmputa
Ebe a, ka na-agbalị Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows). Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, ị nwekwara ike na-eso ya na-yiri nzọụkwụ.
Jikọọ gị iPod aka na kọmputa na-agba ọsọ usoro ihe omume. Mgbe ahụ ị ga-esi isi windows dị ka ndị a.
Cheta na: Jide n'aka na i nwere ọhụrụ iTunes arụnyere na kọmputa gị, ma adịghị agba ọsọ ya mgbe ị na-eji Wondershare Dr.Fone maka iOS.
N'ihi na iPod aka 4:
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-agbake vidiyo si na iTunes ndabere, ị nwere ike họrọ naputa site na iTunes ndabere File n'elu. Họrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ gị iPod aka 5/4, na pịa Malite iṅomi wepụ ya.
Nzọụkwụ 2. iṅomi gị iPod aka
Tupu ị iṅomi gị iPod aka 4 ka undelete iPod aka video, ị chọrọ iji nweta n'ime ya scanning mode mbụ. Ọ bụ nnọọ mfe, na-agaghị wutere gị iPod aka mgbe niile. Dị nnọọ na-eso nduzi n'okpuru ime ya.
Jide gị iPod aka na enweta na Malite bọtịnụ na interface nke Dr.Fone.
Pịa Ike na "Home" buttons na gị iPod aka n'otu oge maka kpọmkwem 10 sekọnd. The Software ga gụọ oge maka gị.
Hapụ Ike button ozugbo mgbe 10 sekọnd, ma na-na ịpị Home bọtịnụ.
Mgbe ị na-ọma banyere scanning mode, usoro ihe omume ga-akpaghị aka iṅomi gị iPod aka site na ya onwe. N'oge a, gị iPod aka ga-atụgharị n'ime nwa. Ọ dịghị mkpa. I nwere ike ịlaghachi ya nkịtị mgbe mgbake.
Nzọụkwụ 3. undelete iPod aka video
Mgbe iṅomi completes, usoro ihe omume ga-n'ịwa a akụkọ maka gị. Ị nwere ike ịlele niile recoverable data ebe a, gụnyere kọntaktị, foto, ozi, ndetu, wdg Dị ka videos, i nwere ike ịhụ ha na udi nke Igwefoto Roll. Akara ha na pịa Naghachi. Mgbe ahụ ị pụrụ ekiri ha na kọmputa gị ugbu a.
Olee otú undelete iPod aka Photos
Hichapụ oyiri Songs on iPod / iPhone / iPad Mfe
Otú e si etinye Music Videos on iPod
Otú nyefee Videos ụdị kọmputa na-iPod aka